Ungalwenza kanjani ubumba lwe-polymer olwenziwe ekhaya | Imisebenzi yezandla ivuliwe
Ungalwenza kanjani ubumba lwe-polymer olwenziwe ekhaya
U-Irene Gil | | Ubuciko nezinto zokwakha
Izikhathi eziningi ngilayisha okuthunyelwe okunikezelwe ku- ubumba lwe-polymer, iyabumba futhi ingasetshenziselwa inani elingenakubalwa Imisebenzi yezandla. Kokubili ukwenza imifanekiso, ukwenza amaketanga okhiye noma ubucwebe. Kuyinto engiyithandayo futhi kumnandi kakhulu ukusebenza nayo.
Okuwukuphela kwento ebuyayo yintengo ngoba akusikho ukuthi ibiza ngokweqile, kepha kuyabiza ngokwanele ukungayithengi uma singenasiqiniseko sokuthi sizokwenzani ngayo noma sizokwazi ukuthi singayinikeza kanjani ukusetshenziswa okuhle. Ngaleso sizathu, kokuthunyelwe kwanamuhla ngilayisha iresiphi yokwenza ubumba lwepolymer olwenziwe ekhaya futhi ukuze uvivinye futhi udlale ngezinto ngendlela eshibhile
La i-polymer ubumba, owaziwa nangokuthi i-Fimo, ingenye yezinto ezibaluleke kakhulu kulo mhlaba wobuciko nemicabango. Ngenxa yalo singakha zonke izinhlobo ezivele ezingqondweni zethu nangaphezulu kwemiphumela engakholeki. Thola konke okudingayo ngaye!
1 Luyini ubumba lwe-polymer?
2 Izinto zokwakha ubumba lwe-polymer
3 Ungalwenza kanjani ubumba lwe-polymer olwenziwe ekhaya
4 Usetshenziswa kanjani ubumba lwe-polymer?
5 Ungathenga kuphi ubumba lwe-polymer?
6 Izinhlobo ezaziwa kakhulu zobumba lwe-polymer
7 Imisebenzi yezandla enobumba lwe-polymer
Luyini ubumba lwe-polymer?
Njengoba siyihambise ngomkhiqizo wezinkanyezi, manje kufanele sazi kahle ukuthi sikhuluma ngani. Ubumba lwe-Polymer luyimbumba ebumbekayo. Impela sonke siyasikhumbula inhlama yokudlala esasiyisebenzisa ngenkathi sisebancane. Yebo, icishe ifane nalena. Ingasetshenziswa ngabancane nabancane, ngoba kulula kakhulu ukusebenza nayo futhi ayidingi noma iyiphi inkinga.
Umehluko kuphela esingawuthola maqondana ne-plasticine ukuthi lolu daka lungahlanganisa imibala. Uma uhlanganisa imibala emibili, uzothola umphumela we-marble wokuqala futhi uma usalula isikhathi sokuxubana, khona-ke uzothola inhlanganisela efanayo.
Izinto zokwakha ubumba lwe-polymer
1 ibhodwe le-teflon.
1 inkomishi ye iglu yesikole esimhlophe (thenga lapha).
1 inkomishi ye isitashi sommbila.
2 wezipuni ze uwoyela wamaminerali.
1 isipuni se ulamula.
I-powder tempera ngemibala ehlukene. (thenga lapha)
Sizohlanganisa zonke izithako ebhodweni leTeflon faka ukushisa phezu kokushisa okuphansi. Uma sifuna inhlama ibe nombala, sizofaka i-tempera eyimpuphu yombala oyifunayo kuzithako, ngaphandle kwalokho, inhlama iyoba mhlophe.
Lapho sesinezithako ebhodweni leTeflon, i- sizoxuba imizuzu eyishumi ngokushisa okuphansi kuze kuhlale inhlama. Bese, isuse emlilweni bese uyivumela ipholile. Bese uyixova kuze kube ukuthungwa okuhle nokulawulekayo. Ekugcineni, ukuyigcina udinga ukuyigcina embizeni engangeni moya.
Esithombeni ngenhla ungabona izingcezu ezenziwe nge ubumba lwe-polymer ukuthi nizenze.
Usetshenziswa kanjani ubumba lwe-polymer?
Manje njengoba sesazi ukuthi luyimbumba ebumbekayo, kufanele sigcwalise imininingwane ecacisa ukuthi lolu daka lusetshenziswa noma luphathwa kanjani. Okokuqala, kufanele sikulolonge. Ukwenza lokhu, uzocabanga ngesibalo ne- uyololonga ngezandla zakho. Ngokushisa kwalezi, kuzoba lula futhi kube lula ukuphatha ubumba. Lapho isibalo usudalile, kufanele usiyise kuhhavini. Yebo, uzoyishiya kuhhavini ojwayelekile imizuzu embalwa. Esitsheni ngasinye sobumba, bazokhombisa isikhathi okufanele usishiye ngaso kepha njengomthetho ojwayelekile kuhlale cishe imizuzu eyi-15, cishe. Lapho siyisusa kuhhavini, mayiyipholise futhi ukusuka lapha, ungayisika noma upende isithombe osenzile. Kalula njengaleyo !.
Ungathenga kuphi ubumba lwe-polymer?
Izindawo zokuqala okufanele siye kuzo ukwazi ukuthenga ubumba lwe-polymer, yizitolo zokubhala nezitolo zobuciko. Kumele kuthiwe, yize kungumkhiqizo owaziwa ngokuya ngokwanda, ngeke ube khona kuzo zonke lezi zindawo. Kwesinye isikhathi kungaba yinkimbinkimbi kithina, kepha sizohlala sinayo i-inthanethi. Kunamakhasi ambalwa, futhi wezobuciko lapho ungawathola khona. Kumele ufune lezo ezingenazo izindleko eziningi zokuthumela ngoba asifuni ukuthi inani lokugcina likhuphuke ngaphezu kwesidingo.
Ungenza kanjani amacici obumba ngamathoni amhlophe nakagolide igxathu negxathu
Izinhlobo ezaziwa kakhulu zobumba lwe-polymer
Njengoba sishilo ekuqaleni, le nto ibizwa nangokuthi yiFimo. Yize kufanele kukhunjulwe ukuthi i-Fimo yigama lohlobo oluthile lobumba futhi akulona igama elejwayelekile. Yebo, kusukela kulesi sisekelo, uyazi ukuthi ngaphansi kwaleli gama ungathola ubumba eSpain. Uzoba nezinhlobo ezimbili ngaphakathi kwayo:
IFimo Classic: Kunzima ukubumba, kepha futhi okuhlala isikhathi eside.
UFimo Uthambile: Manje isilungele ukusetshenziswa. Kepha-ke, ibucayi kakhulu futhi ingahle yephulwe kalula.
Ngakolunye uhlangothi, uzothola nomkhiqizo Sculpey noKato. Ngakho-ke, ngeke usaba nezaba zokukwazi ukusebenza nabo.
Kunconywa ukuqala ngezibalo ezincane nezilula kepha ngokuqinisekile, kungekudala uzokhipha umcabango wakho bese ubona ukuthi umthambo wobuciko uphuma kanjani ngemizuzwana. Ngabe kufanele sisebenze?
Imisebenzi yezandla enobumba lwe-polymer
Abantu abaningi bacabanga lokho nge ubumba lwe-polymer Ungenza izibalo kuphela, futhi noma ngabe yilokho okuthola kakhulu, lolu hlobo lobumba lunikeza amathuba amaningi amaningi.
Uma ufuna ukwenza izibalo futhi uyaqala, kungaba lula kuwe ukuqala ngakho onodoli abalula futhi ngemininingwane embalwa. Ku-inthanethi uzothola "igxathu negxathu" ezithombeni lapho zikufundisa khona ukumodela ingxenye ngayinye yesibalo.
Ezinye zezibalo ezivame ukwenziwa zilula futhi ziyimfashini kakhulu, zingukudla kwesitayela se-kawaii. Kuyinto evamile kakhulu ukufaka ukhiye, uwafake njengamacici, umgexo noma umhlobiso wepensela noma ipeni.
Futhi ungakha izimbali nezitshalo pUkuhlobisa. Umphumela muhle kakhulu. Zisize ngabasiki namathuluzi azokuvumela ukuthi wakhe ama-finish angcono. Imininingwane eyodwa, ungasebenzisa futhi abasiki be-khekhe, ngoba i-fondant noma amakhukhi afana nalawo asetshenziswa ngobumba.
Uzobona ukuthi ngokuzijwayeza okuncane ungenza nezimbali ezingokoqobo impela.
Njengoba sengishilo, akudingeki ukuthi wenze izibalo kuphela, i- umhlobiso wesikebhes kungenye indlela enhle. Unezinkulungwane zemibono ezokugqugquzela ukuthi uhlobise uphinde uphinde usebenzise lezo zimbiza zengilazi ozisebenzisa nsuku zonke. Futhi, uma usebenzisa ubumba lwe-polymeric baking, ngeke ube nankinga yokufaka ucezu lonke kuhhavini, ingilazi izobamba kahle. Qaphela, ungasebenzisi amathini epulasitiki kulokhu umsebenzi wakho uzophela kabi kakhulu.
Ngaphezu kwakho konke lokhu, kunendlela yokwazi umhlobiso eyandayo emhlabeni wobumba lwe-polymer olubizwa nge- "millefiori" noma ngesiSpanish "izimbali eziyinkulungwane". Iqukethe i- ukuhlanganisa izingcezu zobumba lwe-polymer ndawonye ukwenza ithubhu lokho kusikwa kube izingcezu futhi kukhombisa umdwebo owudalile, kungaba okungaqondakali noma onesithombe esithile. Ekuqaleni, kwadalwa izimbali, kepha zavela manje ungathola konke.
Ngiyethemba uyithola ilusizo kuze kube ngokuzayo DIY.
Indlela ephelele ye-athikili: Imisebenzi yezandla ivuliwe » Ubuciko nezinto zokwakha » Ungalwenza kanjani ubumba lwe-polymer olwenziwe ekhaya
I-athikili enhle kakhulu, ngiyabonga ngokwabelana ngayo, ubungayazi leyo ndlela yokukwazi ukuzenzela ubumba lwe-polymer, manje sekuyisikhathi sokuyisebenzisa.
Sawubona, xolisa umbuzo uyini i-powder tempera? Ngihlala eMexico futhi anginasiqiniseko sokuthi ngikuqonde kahle yini, uma uthi i-tempera usho upende wempuphu futhi uma kunjalo, kungaba yimifino noma kanjani?
Sawubona, bengifuna ukwazi ukuthi ungawushintsha yini uwoyela wamaminerali ngoyela ojwayelekile noma omunye uwoyela?
Sawubona, imibuzo emibili
1. Liyini izinga lokushisa lempuphu? Kungaba ama-aniline? Lokho engikusebenzisela ubumba olubandayo futhi cishe izithako ezifanayo
2. Ngabe i-ovini iphoqelekile futhi / noma i-microwave iyasebenza?
UBianca Scheiber kusho
Ungasho ukuthi lolu ubumba lwe-polymer, wenza unamathisela owenziwe ekhaya, ipasta ebandayo noma ubumba waseFrance, ungenzi abantu bawele ephutheni, ubumba lwepolymer akunakwenziwa ekhishini ngoba lubandakanya izinqubo zamakhemikhali eziyinkimbinkimbi ekulungisweni kwalo
Phendula uBianca Scheiber
Sicela ulungise okuthunyelwe kwakho, lokhu akulona ubumba lwe-polymer, lolu uhlobo lwe-porcelain eyenziwe ngokwenza. Ubumba lwePolymer ludinga izinqubo eziyinkimbinkimbi zamakhemikhali, njengoba negama lalo lisho, yipulasitiki ye-polymer noma ye-PVC edinga ilabhorethri ephelele futhi enolwazi lokuyenza. Musa ukudida abantu, ngingumbonisi webumba le-polymer futhi lokhu akunalutho ngaphandle kwengisebenza nakho.
Musa ukudida abantu !!!
Okushoyo AKULONA ubumba lwe-polymer.
I-Polymeric iyi-paste esuselwa ku-PVC, i-polymer epulasitiki eyenziwe ngamamolekyuli amaningana (ama-monomers) e-vinyl chloride. Inqubo ye-vinyl chloride polymerization inobuthi kakhulu futhi yenzeka emafektri asezikhiqizweni ezivalwe ngobuciko.
Sawubona, ntambama enhle, i-ovini iyimpoqo kulolu hlobo lobuciko? ,, ngiyabonga kakhulu kusengaphambili !!!
Ngiyavuma, lokhu akulona ubumba lwe-polymer, kubanda ngobumba olwenziwe ekhaya. Noma ngabe ilapheke kanzima kanjani kuhhavini, mayeke yomile, uma ucezu lucwiliswe emanzini, luqeda ukuncibilika, olungenzeki ngodaka lwe-polymer lweqiniso, olungaba semanzini ngaphandle kwenkinga, ngoba luhlala lufana Into ye-PVC
Kuhle kweminye imisebenzi yezandla, futhi akubizi ukusebenza nezingane. Kepha ayihlali isikhathi
UBellanira Melendez kusho
Ngiyabonga kakhulu, ukusetshenziswa kwalo mkhiqizo kungicacise kakhulu. Ezweni lami asikabi nawo lo mkhiqizo, ngiyabonga ngihlala ePanama, iqiniso ukuthi angazi noma bayawuthengisa, ngisebenze ngobumba olubandayo. Ngiyabonga
Phendula uBellanira Meléndez
I-athikili inhle, siphuthelwa ubumba lwe-polymer nge-PVA, i-polyvinyl alchohol okuyizinto ezomisa umoya wobumba lwe-polymer, futhi sincoma ubumba lwaseKorea ngoba lunekhwalithi enhle kakhulu.
Ngicabanga ukuthi ube nomqondo omuhle lapho utshela indlela yokwenza ubumba olufanayo ekhaya futhi ikhemikhali engeyona ingozi futhi equkethe ama-polymers yi-glue.
Sawubona! Ngikufunde kahle okuthunyelwe kwakho, awukucacisanga ukuthi kubhakwa ngezinga elingakanani. Ngiyabonga Ukubingelela okuvela e-Argentina
Ungasenza kanjani isiphathi samakhandlela ngokusebenzisa kabusha ikani le-tuna.
I-DIY ungayenza kanjani incwajana yasentwasahlobo eshidini.